အမျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်သူများအား စိန်ခေါ်ခြင်း (၂) | Ko Rohingya
အမျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်သူများအား စိန်ခေါ်ခြင်း (၂)
အမျိုးဆိုသည်မှာ လူမျိုးတစ်မျိုးကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ဥပမာ – မြန်မာ၊ ကချင်၊ ရှမ်း၊ ချင်း။ ကဲ- ကောင်းပြီ။ အဲဒီ လူမျိုးမတူသူများအချင်းချင်း (ဥပမာ- ကချင် + မြန်မာ) လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း လုံးဝ မရှိပဲ၊ သီးသန့် လူမျိုး တစ်မျိုးတည်း (မြန်မာ)မှ အချင်းချင်း လက်ထပ်ပေါင်းသင်း၍ (မြန်မာ+မြန်မာ) ရရှိလာသည့် လူဦးရေသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် များနေပါသလော။ သို့မဟုတ် ခြားနားသော လူမျိုးများ ဥပမာ – ရခိုင် + မြန်မာ ပေါင်းသင်း၍ ရရှိလာသည့် လူဦးရေသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် များနေပါသလော။ ဤအချက်ကို အရင်ဦးဆုံး ဆန်းစစ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မည်။
သို့ပါ၍ ထိုသို့ ဆန်းစစ်ရာတွင် နိုင်ငံတော်၏ ထိပ်ဆုံးပိုင်းမှ “စတင်”၍ ဆန်းစစ် ဖော်ထုတ်ကြရပေမည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ သမ္မတ ဓာတုဦးသိန်းစိန်ပြီးသည့်နောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ရာထူးကို ချုပ်ကိုင်ထားသူ၊ လူမျိုးစစ်/မစစ်၊ တိုင်းရင်းသား ဟုတ်/မဟုတ်၊ သွေးဖြင့် နိုင်ငံသား အသိအမှတ်ပြုမည်ဟုဆိုခဲ့ဖူးသည့် လ၀က၀န်ကြီး ဦးခင်ရီအား ၎င်း၏ သွေးသည် လူမျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတည်း၏ သွေးလော၊ (သို့မဟုတ်) လူမျိုးတစ်မျိုးထက်မကသော လူမျိုးများ လက်ထပ်ပေါင်းစပ်ထားသည့် သွေးလောဆိုသည့်အချက်ကို ဆန်းစစ်ကြည့်ရန် လိုပါသည်။ လ၀က၀န်ကြီး ဦးခင်ရီ၏ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် ခုနှစ်စလုံး မြန်မာလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းမှ လူသားများ အချင်းချင်း (မြန်မာ + မြန်မာ) လက်ထပ်ပေါင်းသင်း၍ မွေးဖွားလာသူလော။ သို့မဟုတ် မြန်မာ + ရခိုင်၊ မြန်မာ + ချင်း၊ မြန်မာ + ကရင် စသည့် လူမျိုးကွဲပြားသူများ လက်ထပ်ပေါင်းသင်း၍ ရရှိလာသူလော။ ဤအချက်ကို အဖြေထုတ်ရန် အလွန် အရေးကြီးပါသည်။ အကယ်၍ အနှီ လ၀က၀န်ကြီး ဦးခင်ရီသည် လူမျိုးကွဲပြားသည့် ဥပမာ- ရခိုင် + မြန်မာ ပေါင်းသင်း၍ ရလာသူဖြစ်လျှင် အမျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်သူများအနေနှင့် ၎င်းအား မျိုးမစစ်သောကြောင့် မျိုးစစ်၊ မစစ်ရွေးချယ်ရသော လ၀ကရာထူးမှ ဖယ်ရှားသင့်ပေသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းကိုယ်တိုင် လူမျိုးတစ်မျိုးတည်း လက်ထပ်ပေါင်းသင်းခြင်းကို ထိန်းသိမ်းခြင်းမရှိသည့် မျိုးနွယ်မှ ဆင်းသက်လာသူ ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပင်။
သို့ပါ၍ ကျွန်ုပ် Ko Rohingya မှ အနှီ လ၀က၀န်ကြီး ဦးခင်ရီသည် ဘိုးစဉ်ဘောင်စဉ် ခုနှစ်ဆက်စလုံး လူမျိုးတစ်မျိုးတည်းမှ (ဥပမာ- မြန်မာ (သို့မဟုတ်) ရခိုင် (သို့မဟုတ်) ချင်း) ဆင်းသက်လာကြောင်းကို ၎င်း၏ ဘိုးဘွားဘီဘင် အထက်ထက်၊ အဆက်ဆက်တို့၏ မွေးစာရင်းများ၊ သေစာရင်းများ အိမ်ထောင်စု စာရင်းများ၊ အစိုးရ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော ကိုးကားနိုင်လောက်သည့် မှတ်တမ်းမှတ်ရာများနှင့်တကွ တင်ပြနိုင်သူအား ဆုတော်ငွေ မြန်မာကျပ် (၁) သန်းတိတိ ချီးမြှင့်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ကြေညာမောင်းခတ် လိုက်ရပါသည်။
ယုတ္တိမရှိသော အတွေးအခေါ်၊ အယူအဆများဖြင့် လက်တစ်လုံးခြား ပြည်သူကို လှည့်ဖြားတတ်သော စစ်အာဏာရှင်ဟောင်းများနှင့် ၎င်းတို့၏ အလိုတော်ရိများ အားလုံး၏ မဟုတ်လိမ်လည် လုပ်ကြံဝါဒဖြန့်သည့် မိုးလုံးပြည့် မုသားဝါဒအမျိုးမျိုး၊ အကြမ်းဖက်မှု အသွယ်သွယ်မှ ကင်းဝေးလွတ်မြောက်ကြပါစေ။ အာမီးန်။
မှတ်ချက် ။ ။ ထိုအမျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်နေသူများအနေနှင့် “ငါတို့၏ ဘိုးဘွားဘီဘင် ခုနှစ်ဆက်စလုံးမှာ လူမျိုးတစ်မျိုးမှ လူသားအချင်းချင်း (ဥပမာ- မြန်မာ + မြန်မာ) လက်ထပ်ပေါင်းသင်း၍ လူဖြစ်လာသောသူများလော”ဟု အရင်ဆုံး ဆန်းစစ်ဝေဖန် လေ့လာသင့်ပါသည်။
This entry was posted on February 6, 2013, in စိန်ခေါ်မှုများ and tagged ချမ်းမြေ့, စစ်အာဏာရှင်, စိန်ခေါ်မှုများ, တိုင်းရင်းသား, လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကြီး, သားသတ်သမား, အကြမ်းဖက်သမား, ဦးခင်ရီ, တောင်ကုတ်လူသတ်မှုကြီး, Burmese Muslim Youths For Human Rights And Justice. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← အမျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်သူများအား စိန်ခေါ်ခြင်း (၁)
Eleven Media Group နှင့် ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်အား စကားစစ်ထိုးပွဲအတွက် စိန်ခေါ်လိုက်ခြင်း →